Industrial nju - China Ningbo enweghị
China Industrial nju Manufacturer
The anọ iche iche nke na-adịgide adịgide nju nwere ike niile ga-eji dị ulo oru nju. N'ihi ha dị iche iche atụmatụ na arụmọrụ, ha na-etinyere na dị iche iche ulo oru ngwaahịa. Ka ihe atụ, neodymium ígwè boron nju na ferrite nju na-akasị ji maka Motors na generators. The kacha ọrụ okpomọkụ nke Alnico nju bụ ruo 550 ~ 600 ℃, ha na-ala-eji na iche iche iche iche nke ulo oru akwara na mita. Tụnyere NdFeB nju, SmCo nju bụ ihe kwesịrị ekwesị na-arụ ọrụ na elu okpomọkụ na gburugburu ebe obibi. E wezụga, SmCo na-adịgide adịgide nju bụ nnọọ ike na-eguzogide nke corrosion na ọxịdashọn. Ya mere, ha na-n'ọtụtụ ebe na mba-agbachitere ụlọ ọrụ, agha ụlọ ọrụ, ngwa ndakwa nri ngwaọrụ, mmetụta, magnetik gia, magnetik processor na ọkụ igwe
Previous: ehi nju
Osote: Motor Generator nju
Magnetik Key njide
Magnetik Water Ọgwụgwọ